Baotou Simbi yekutanga batch ye5,000-tani njanji inozadzisa "gore" kutengesa - China Foshan Hermes Simbi
Baotou Simbi yekutanga batch ye5,000-tani njanji inowana "gore" kutengesa
Musi waMarch 2, Baotou Steel Sales Company yakataura kuti kambani yekutanga yekambani zviuru zvishanu zvematani esimbi yakanga ichangobva kuwana "gore" rekutengesa, izvo zvakaratidzawo kuti njanji dzeBaotou Simbi dzakasvetukira ku "gore" mune imwe swoop.
Baotou Simbi iri muBaotou Guta, Mukati meMongolia Autonomous Dunhu. Iyo ndeimwe yekutanga simbi maindasitiri mabhesheni akavakwa mushure mekuvambwa kweNew China. Iine makambani maviri akanyorwa, "Baogang Iron uye Steel Co, Ltd." uye "Baogang Rare Earth", iri imwe yenzvimbo dzeChina dzekugadzira njanji, imwe yeasina kugadzirwa simbi yekugadzira pombi, uye hombe kugadzirwa kweplate muNorth China. Ndiwo zvakare mavambo uye hombe pane epasirese epasi indasitiri. Iyo isingawanzo pasi pasainzi yekutsvaga uye yekugadzira base
Sekureva kwesumo, zvakasiyana neyakajairwa nzira yekutengesa, iyi ndiyo yekutanga batch yesimbi njanji inotengeswa neBaotou Simbi kuburikidza neNational Energy e-shopu yekutengesa.
National Energy e-shopping mall ndiyo yega B2B yakazvimirira inozvishandira e-commerce chikuva mukati meNational Energy Group. Inobatanidza kubhidha, kubvunza mutengo, kuenzanisa kwemitengo, uye nzvimbo dzekutengesa mune yemagetsi kutenga system, inosanganisira zvinhu munzvimbo zhinji dzebhizinesi senge marasha, kutakura, uye simba nyowani. Kutenga nekushandira dzinosvika chiuru nemazana mana ezvikamu zveNational Energy Group.
Zviwanikwa zvepamutemo zvinoratidza kuti nguva pfupi yadarika, Baotou Iron & Simbi vakatungamira mukutaurirana njanji e-commerce yekutengesa sisitimu yemhando pamwe nechinzvimbo chinotakura nzvimbo yekutakura yeNational Energy e-shopu mall, ndokusaina chibvumirano chekutenga chimiro, ichiva wekutanga mutengesi wezvitima mumusika. Chibvumirano ichi chinofukidza ese makambani enjanji ari pasi peNational Energy Group, uye njanji dzeBaotou Steel dzinorema-basa, njanji dzakadzimwa, njanji dzepasi zvisingawanzo uye zvimwe zvigadzirwa zvakasimudzirwa zvakanyanya.
Baotou Steel Group Corporation yakataura kuti nekushandisa kwakadzama kwehurongwa hwenyika "Internet +", boka richasimudzira kushambadzira kwakasiyana-siyana kweseiri dzesimbi. (Pedza)